गीत–संगीतबाट अलग भएको छैन : बुद्धिसागर बस्याल – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ फाल्गुन ४, आईतवार ०९:०८ गते
स्याङ्जाको मालुङगा गाउँमा जन्मिएर स्वदेशदेखि विदेशसम्मको सांगीतिक अनुभव हासिल गरेका बुद्धिसागर बस्याल लोकदोहोरी क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक मानिन्छन् । एकदशक लोकदोहोरी क्षेत्रमा जमेर अर्को एकदशक ओझेल परेका उनी फेरि गीतसंगीतको क्षेत्रमै समर्पित भएका छन् । आफूलाई थाहा भएदेखि गीत गाउन सुरू गरेको बताउने बस्याल युवादेखि बुढापाकाले रुचाइएका गायकमध्ये एक हुन् । उनले २२ वर्षको उमेरमा गाएको बुढेसकालैमा बोलको गीत आजपर्यन्त उत्तिकै समय सान्दर्भिक र जनजिब्रोमा झुण्डिरहेको पाइन्छ ।
उनले एक दर्जन एल्बम निकालेका छन्, प्रायः सबै गीतले विभिन्न म्युजिक अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । उनले कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सुरू गरेको लोकगीतको कार्यक्रमबाटै लोकदोहोरी क्षेत्र स्थापितमात्र भएन, धेरै कलाकार जन्माउन सहयोगी पनि भयो । जुन आज लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित भएका छन् । यतिमात्रै होइन १४ वर्षे क्यानडा बसाइमा उनले उत्तर अमेरिकामा नेपाल स्थापित गर्ने काम पनि गरेका छन् । आफूलाई सांगीतिक यात्री भन्न रुचाउने उनले आफ्नो धर्मसंस्कृति र कलाको माध्यमबाट बुद्धको सन्देश प्रवाहित गर्न सकेकोमा गर्व महसुस गर्छन् ।
यिनै मूर्धन्य कलाकार बस्याल देशदेशावर घुमेर, अध्ययन गरेर आफ्नै जन्मभूमिमा उत्रिएका छन् । लोकगीतलाई गाउँदेखि सहरसम्म पु¥याउन उनको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । सामाजिक विभेद र समस्याको उजागर गर्दै आवाजविहीनहरुको आवाज मुखरित गर्न र सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा लागिपरेका गायक बस्यालसँग चितवन पोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– म गीतसंगीतको क्षेत्रबाट अलग भएको छैन । मेरो रगतमा गीतसंगीत बगिरहेकै छ । जहाँ रहे पनि गीतसंगीतप्रतिको मोह घटेको छैन । सागरको पानी बग्दै महासागरमा पुगेजस्तै म पनि केही समय महासागरमा मिसिएको हुँ । संगीतमै ज्ञान र जीवन निरन्तर बगिरहेको छ ।
– केही वर्ष वैदेशिक यात्रामा पुगे पनि म कहीँ गएको छैन । रुँदै विदेश गएको थिएँ, हाँस्दै फर्किएको छु कुरा यत्तिमात्रै हो । म हिमालको काखबाट कहिल्यै पर भाग्न सक्दिनँ । आफ्नो देशको महत्व थाहा पाउन पनि एकपटक जोकोही विदेश जानैपर्छ । विदेश जानु पलायन हुनु होइन पलाउनु हो । किनकि पृथ्वी हाम्रै हो । जब चराका लागि कुनै सीमा हुँदैन । पानीका लागि सीमा हुँदैन भने मानिसका लागि पनि सीमाले बाँध्नु उचित होइन । आफ्नो धर्मसंस्कृति र कर्म गर्न छाड्नु हुँदैन । मानिसद्वारा बनाइएका सीमा भत्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हुँ म ।
– नेपाली युवाहरु विविध कारण विदेश जान बाध्य छन् । विदेशमोहले समाजमा पारेको प्रभावका कारण सामाजिक सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने अभियानमा छु । केही महिनाअघि परेलीले…गीत ल्याएको थिएँ । फेरि लाहुरे एल्बममार्फत् दुलहीको मायाले बोलको गीत दर्शक स्रोतामाझ ल्याएको छु । यस्तै माकुरी जाल बुनेको र ज्योति मगरसँग खोलीभित्र पानी चोलीभित्र जवानी बोलको कलियुग एल्बम पनि ल्याएको छु । दर्शकस्रोताले निकै रुचाउनु भएको छ ।
–पत्रकारिताजस्तै गीतसंगीत पनि समाज परिवर्तनको माध्यम हुन सक्छ । मैले लाहुरे एल्बम निकाल्ने क्रममा छायांकनको क्रममा त्रिशूली नदी किनारमा ट्युबको माध्यमबाट नदी तरेर विद्यालय जाँदै गरेका चेपाङ बालबालिकाको नियति चित्रण गरेको थिएँ । त्यही भिडियोमार्फत् नै मूलधारका पत्रपत्रिकाले समाचार रिपोर्ट बनाए । त्यसपछि सरकारले तुइन हटाएर पुल बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको हो । अहिले देशैभरि तुइन विस्थापित गर्ने सरकारको योजना बनेको छ । समस्या उजागर गर्न लोकसंगीत एउटा माध्यम बन्न सक्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो । गीतसंगीतले कथा भन्न सक्नुपर्छ, समाजमा एउटा सन्देश फैलाउन सक्नुपर्छ । यो परिवर्तनका लागि सशक्त माध्यम हुनसक्छ ।
–जीवनसँग संगीतको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सृष्टिकर्ता भगवान् शिवको हातमा डमरु, भगवान् कृष्णको हातमा बाँसुरी र विद्याकी देवी सरस्वतीको हातमा विणा हेर्दा नै पुष्टि हुन्छ कि जीवनसँग संगीतको अर्थपूर्ण सम्बन्ध छ । गीतसंगीत नभए जीवन कति विरसिलो हुन्थ्यो होला ? संसार कस्तो हुन्थ्यो ? कतिवटा युद्ध भइसक्थे । सयौँ मानिसलाई भुलाउने, झुलाउने, शान्त बनाउने गीतसंगीतको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै छ ।